ကချင်ဒုက္ခသည်များအတွက် ပထမဆုံး ဂျပန် အကူညီ လက်ခံရရှိ – Myanmar Peace Monitor
ပထမဆုံး ဂျပန်အစိုးရ လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအကူညီပေးအဖွဲ့ The Nippon Foundation ၏ ကချင်စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များအတွက်ပေးသော အကူညီ ဒေါ်လာ ၃သိန်းကို ဧပြီလ ၄ရက် တွင် လက်ခံရရှိကြောင်း ကချင်စစ်ပြေးဒုက္ခသည်ကူညီရေးကော်မတီ (KHCC) က ဆိုသည်။
ဒုက္ခသည်အကူညီငွေကို မြစ်ကြီးနားမြို့ ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် KBC ရုံးသို့ The Nippon Foundation ဝန်ထမ်းများ လာရောက် ပေးအပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“ဒီရရှိတဲ့အလှူငွေတွေကို အစိုးရထိန်းချုပ်နယ်မြေက စစ်ရှောင်တွေနဲ့အစိုးရထိန်းချုပ်မှုပြင်ပက စစ်ရှောင်တွေ နောက်ပြီးနေရပ်ပြန်စစ်ရှောင်များဖြစ်စေ၊ မပြန်သေးတဲ့စစ်ရှောင်များဖြစ်စေ တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာ အသုံးပြုသွားမှာပါ” ဟု KHCC ခေါင်းဆောင်နှင့် KBC ဥက္ကဌ Rev. Dr. Hkalam Samson မှ ကချင်သတင်းဌာန KNG ကို အတည်ပြုပြောပါသည်။
Nippon Foundation က ကချင်စစ်ရှောင်များနေရပ်ပြန်နိုင်ရေးအတွက် အကူညီများ ဆက်လက် ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း Kachin Humanitarian Concern Committee က ဆိုသည်။
မြန်မာအစိုးရနှင့် ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO တို့ နှစ်ဖက်သဘောတူသောနေရာတွင် စစ်ရှောင်များ တရားဝင် နေရပ်ပြန်လာနိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရနှင့် အကူညီပေးအဖွဲ့စည်းများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ KHCC ပြုလုပ်နေသည်ဟု Rev. Dr. Samson က ဆိုသည်။
ယခင် Nippon က အစိုးရထိန်းချုပ်မှုပြင်ပတွင်ရှိသောစစ်ရှောင်များကိုကူညီရန်ခက်ခဲမှုရှိပြီး KIO က တနိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး NCA စာချုပ် လက်မှတ်ထိုးပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိမှသာ ကူညီပေးနိုင်မည်ဟု ဆိုသောကြောင့် အဆင်မပြေမှုရှိခဲ့သော်လည်း
စစ်ရှောင်များသည် အစိုးရထိန်းချုပ်နယ်မြေထက် အစိုးရထိန်းချုပ်မှုပြင်ပတွင် ပိုများကာ အကူအညီများ အမှန်တကယ်လိုအပ်နေကြောင်းရှင်းပြမှုပေါ်လက်ခံလာသောကြောင့် ယခုလို အကူညီပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း Rev. Dr. Samson က ဆိုသည်။
KHCC စာရင်းအရ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း အစိုးရထိန်းချုပ်နေရာများတွင် စစ်ရှောင် ဦးရေ ၄၀၀၀၀ ကျော်ရှိပြီး KIO ထိန်းချုပ်နေရာများတွင် ၈၀၀၀၀ ကျော်ရှိကြောင်း သိရသည်။
← Nippon Foundation Assistance Prioritized for IDPs in Govt-Controlled Areas
စစ်ရှောင်ခေါ်ထုတ်ရေး ကြိုးပမ်းသူ ဆရာမ နန်ပူ အကျဉ်းထောင်မှ လွတ် မြောက်လာ →